Finn iyo Lataliyihii ku Swirly | Finn iyo boosaska wareejin Swirly | CoinFalls Casino
The Finn iyo boosaska wareejin Swirly waxaa jira booska cusub ee gaarka ah ee ay soo Netent. ciyaarta Afyare Tani gaadiid doonaa ciyaartoyda in gasiiradda sumurud, halkaas oo aad ka heli doontaa leprechaun ah sixir yeedhay Finn ka ciyaaro tunings Irish uu biibiilaha. Tani casino Irish-design, naadi mobile ayaa ku qarashgareyso suuqa ah ku ambadeen wax aad u kala duwan iyo waxaa loogu talagalay oo leh 5 × 5 Roobka oo ay la socdaan 25 meelaha
Finn iyo Lataliyihii ku Swirly naadi gameplay!!
The Finn iyo boosaska wareejin Swirly waa la bixin ka qiimaha ugu yar oo ah £ 0.10 qiimaha ugu badan oo ah £ 200.00 per Lataliyihii. Si kastaba ha ahaatee, ciyaarta booska uu leeyahay cadow hoose iyo inuu ku laabanayo boqolkiiba ciyaaryahan ee 96.61%. Abuuray walxood oo si fiican u gurato, ay timaado la nuts, luul, Quluubtooda, horseshoes, majarafadihii, iyo clovers. Sidoo kale, icon ee muhiimka ah waa la aqoonsaday sida icon kala firdhiso oo icon ku duurjoogta ah waa xiddiga ugu dhoola huruud ah, taas oo la aasaasay markii isku-dar ah ku guuleystay uu ku qarxay intii lagu wareejin kasta.
In kulanka Afyare this, guul ah oo ay ka mid wilds yihiin kuwa aan i.e kala duwan marka icon banjoog ah u sameeyaan qayb ka mid ah Combo guuleystay, ka dibna waxa uu heli doonaa qarxi iyo yareyso oo dhan astaamo horizontal iyo waa vertical ku xiga in ay. Halka, haddii guul wax kuma saabsana wax duurjoogta ah, markaas walxood oo cusub duurjoogta dhici doonaa meel of walxood oo aad ka libdhay dib guushii.
Features Game Base Of Finn iyo boosaska wareejin Swirly
Waxaa jira afar aan kala sooc lahayn shaqeysiin wareeg ciyaarta salka ku Finn iyo boosaska wareejin Swirly.
Starfall Wilds dari doonaa laba ilaa shan wilds dheeraad ah oo ku saabsan screen.
Dragon dumiya yareyso doonaa tiro kasta random ah astaamo samayn doonaa, waayo, gebiyo kale.
Nasiib Irish wadar ahaan doonaa line a toosan ama dadban ee astaanta la mid ah. Habkaani oo keliya shidaa marka natiijada wareejin in guul no.
Magic ka bedelaan beddeli doonaa oo dhan qalbiyadooda iyo majarafadihii in walxood oo kale sare bixinta.
Daarida bonus on Finn iyo boosaska wareejin Swirly waa mid aad u badan oo ka naadi kale oo kala duwan. In wareega this, ciyaartoyda waxaa looga baahan yahay in ay qaataan icon kala firdhiso oo muhiim ah xagga dhexe ee shaashadda oo ay sidaas samayn kartaa adigoo la gaaro guul oo isku xigta, in ka saari doonaan walxood hore ee muhiimka ah iyo u ogolaan doonaa kala firdhi dhaqaaqaan dhexe ee shaashadda. By sidaas samaynaya, ciyaartoyda dhaqaajiso karaa afar wareeg oo gunno oo kala duwan kuwaas oo bixiya qaar ka mid ah xaddi doonteen inay ciyaartoyda.
Star Bar The - mid muhiim ah: toddoba dhigeeysa Free ay la socdaan feature Starfall Wilds
Dhagax dab Godku - afar furayaasha: saddex dhigeeysa Free ay la socdaan Dragon dumiya feature
Bakeerigaagu Lucky - sagaal furayaasha: afar dhigeeysa Free ay la socdaan feature nasiib Irish
Golden Pot - lix iyo toban furayaasha: laba dhigeeysa Free ay la socdaan Magic ka bedelaan feature
Finn iyo boosaska wareejin Swirly ayaa gameplay xiiso leh oo si weyn u soo jiidata ciyaartoyda dhinaca this casino naadi mobile. Waxay ku lug leedahay badan madadaalinta iyo sidoo kale muuqaalada gunno abaalmarin. Sayidka, Afyare tani waa hubaal istaahila jeeg baxay.